Tafatafa Amin’i Abdou Salam, Anisan’ny Tompon-kevitra Tamin’ny Tetikasa “Hanaovantsika Sarintany i Nizera” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2013 23:45 GMT
Rising Voices dia faly mampahafantatra anareo ireo mpianatra avy ao amin'ny tetikasa Sarintany ho an'i Nizera iray amin'ireo tetikasa nahazo vatsy madinidinika avy amin'ny Rising Voices tamin'ity taona ity. Mampahafantatra ny tenany tamin'ny alalan'ny mailaka nalefany ho anay ireto mpianatra telo tompon-kevitra tamin'ity tetikasa ity. Resadresaka faharoa niarahana tamin'izy ireo ity:
Mahaman, Fatiman, sy Abdou Salam, mpianatra tamin'ny tetikasa Sarintany ho an'i Nizera.
Abdou Salam no anarako, monina ao Niamey, renivohitr'i Nizera aho, ary tao aho no nandrato fianarana. Teratany avy ao Zinder aho, tanàna eo amin'ny 1000 kilometatra eo miala ao Atsinanan'i Niamey.Tao no renivohitra voalohany tao amin'ny firenena.
Mpianatra taranja jeografia aho, toy izao ny lalana nodiaviko: tamin'ny taona 2012, nandray anjara tamin'ny forum iraisam-pirenena miteny frantsay, Tanora sy ny Asa-Maitso aho; ary nahazo diplaoma rehefa nahavita namorona tetikasa madinika.
[Momba ny fahaizako informatika], mampiasa matetika ny Word aho; tamin'ny taona faharoa [tao amin'ny oniversite], nampianarina Adobe Illustrator hanaovana sarintany izahay, saingy mbola mila manamafy ny fahaizako momba izany aho, satria vao nampianarina ny fomba fandraketana an-tsarintany amin'ny alalan'ny sarintany ôrizinaly izahay. Nanapa-kevitra handray anjara tamin'ity tetikasa ity aho satria mifanaraka tsara tamin'ny fianarana jeografia norantoviko izany. Ary fomba iray hahaizana bebe kokoa momba ny GPS, ny fampiasa azy sy ny ilàna azy.
[Mandritra ity tetikasa sarintany ity], nozarazarainay vondrona maromaro ny ekipa, satria nifanindry tamin'ny vanim-poana fialan-tsasatra ny fandaharam-potoana hanangonana ireo tahiry GPS, ka misy ny vondrona nijanona ao Niamey raha nijanona ao an-tanàna ihany kosa ny hafa mandritra ny fialan-tsasatra. Izaho kosa mijanona ao amin'ny [firenena nahaterahako] ao Zinder ary samy mametraka an-tsarintany izay vaovao voaangony ny tsirairay.
Efa nanoratra lahatsoratra am-polony momba ny tetikasa aho izay havoakako tsy ho ela. Tia maka sary sy mamoaka lahatsary ao amin'ny bilaogy aho…saingy mbola hitako sarotra ny fampiasana ireo fitaovana nomerika. Hamoaka lahatsoratra maromaro momba ny hetsika ankehitriny, sy ny zava-misy ao [Nizera] aho.
Manoratra amin'ny teny frantsay aho. Miteny Haoussa 90 isan-jato amin'ireo namako aho, ary miteny frantsay kosa ho an'ireo izay tsy mahazo ny teny Haoussa. Miteny Haoussa 100 isan-jato miaraka amin'ny fianakaviako aho satria tsy nandia-fianarana nianatra teny frantsay izy ireo. Sarotra ho ahy ny manoratra amin'ny teny Haoussa satria manana ny abidiany manokana izy, ary mbola mila hianarana ny abidia raha te-hahay hanoratra azy tsara.
Azona vakiana ireo lahatsoratr'i Abdou Salam ao amin'ny bilaogy Manao an-tsaritany ho an'i Nizera. Nadikan'i Laura Morris tamin'ny teny anglisy ny resadresaka niarahana taminy tamin'ny teny frantsay.